के तपाइँ आफ्नो धुमपान लत छुटाउन चाहनुहुन्छ ? चाहनुहुन्छ भने एकपटक पढ्ने कि ? « Naya Bato
के तपाइँ आफ्नो धुमपान लत छुटाउन चाहनुहुन्छ ? चाहनुहुन्छ भने एकपटक पढ्ने कि ?
नेपालमा धुम्रपान र सुर्ती सेवनबाट बर्सेनि २६ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ। धुम्रपानले ज्यान लिन्छ भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी त्यहि सेवन गरि राखेका हुन्छौ । लत लागिसकेको धुम्रपान त्याग्ने कुरा मानिस कल्पना समेत गर्न सक्दैनन् । तर त्यसो होइन, धुम्रपान सजिलै त्याग्न सकिन्छ । सबै भन्दा पहिला म धुम्रपान त्याग्छु भन्ने आत्मविश्वास चाहिन्छ ।
अंगुरको बियाँ : अंगुरको बियाँको रस बनाएर नियमित सेवन गर्दा शरीरमा एसिडिटीको मात्रा कम गर्छ । यसले धूमपानका कारण शरीरमा पुरेको असर विस्तारै काम पनि गर्छ ।
जौको चिउरा : जौ को चिउरा ले शरीरमा भएका घातक विषाक्त पदार्थ शरिर बाहिर निकालेर धूमपानको चाहना कम गर्न सहयोग पु¥याउछ । ‘धुम्रपान’ छोडेपछि हुने परिस्थितिलाई ‘नियन्त्रण गर्न पनि यसले महत्व पूर्ण भूमिका निवार्ह गर्दछ ।
पानी : शरीरको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न पानी निकै प्रभावकारी हुन्छ । खाना खानुभन्दा १५ मिनेटअगाडी नियमित एक गिलास पानी पिउँदा शरीरमा एसिडको मात्रा नियन्त्रित हुन्छ ।पानीले धूमपानको चाहना कम गराउदै लिएर जान्छ । दिनभर नै थोरै–थोरै गर्दै पानी पिउन आवश्यक हुन्छ ।
रातो खुर्सानी : रातो खुर्सानीले श्वासप्रश्वास प्रणालीलाई बलियो बनाउने काम गर्छ । यसले धूमपानको चाहनालाई पनि अन्त्य गर्दै जन्छ । तरकारीमा पिनेर ए उटा रातो खुर्सानी मिसाएर खाएमा तुरुन्त चुरोटको लत कम गर्न सकिन्छ ।
मुला : मुला खानाले ‘चेन स्मोकर्स’ले समेत लतबाट छुट्कारा पाउन सक्छन् ।अझ महसँग मिलाएर मुलाको चाना खाएमा छिट्टै सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन्छ ।
धुम्रपानको तल तल लागेमा ल्वाङ र सुकमेल, चुइङगम चपाउने गर्नुपर्छ ।
धुम्रपान छाड्न चिया, कफि पहिला छाड्नुपर्छ ।